Dadkii ugu badnaa oo laga helay maalin kaliya covi19 Itoobiya – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Dadkii ugu badnaa oo laga helay maalin kaliya covi19 Itoobiya
warbixiintii ugu danbeysay xanuunka saf marka ah ee covid19 Ethiopia waxaa maanta la shaaciyey dadkii ugu badnaa ee maalin kaliya laga helo xanuunka COVID19 itoobiya iyadoo 399 qof laga helay xanuunka 24 saac ee lasoo dhaafey .
Natiijooyinka ayaa ka baxsan dadkan xanuunka waxay aheyd 4848 shaybaar oo la sameeyey.
Tani waxay guud ahaan ka dhigeysa xaalada dadka xanuunka qaba itoobiya 4469kiiska.
dadka ka bogsadey xanuunka covid19 waxaa ka bogsadey 95 bukaan ah ayaa sidoo kale soo kabsaday / 24 saac, taas oo wadarta guud ka soo kabashada # ahayd 1,122. wax dhimasho ah lama sheegayo 24kii saacadood ee lasoo dhaafey !
135 ka mid ah 399 ayaa laga soo aqoonsaday Xarunta Shaqaalaha Rayidka ee ku taal #AddisAbeba halka 132 ay ka yimaadeen #Dawale xarunta karantiilka ee #gobolka Somalida, maalinba maalinta ka dambeysa waxay ka helaan labada xarun inuu kusii kordhayo dadka qabaa
Previous articleDalka Brazil ayaa kor u dhaafay 1 milyan oo xaaladood markii coronavirus ku faafay gudaha dalka
Next articleMidowga Afrika oo xannibay Koonfurta Suudaan